စာရင်းကိုင်, စာရင်းစစ်, အခွန် | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အမျိုးအစား: စာရင်းကိုင်, စာရင်းစစ်, အခွန်
တစ်ဦးလုပ်ရပ်, ရမှတ်နှင့်ငွေတောင်းခံလွှာများအကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ, ငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးပြောပြပါ?
ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုပြောပါ။ လုပ်ရပ်တစ်ခု၊ ငွေတောင်းခံလွှာနှင့်ငွေတောင်းခံလွှာများအကြားခြားနားချက်များကဘာလဲ။ မင်းသမီးကအကောင်းဆုံးအဖြေကိုဖြေခဲ့သော်လည်းအိမ်သာသုံးစက္ကူနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ခက်ထန်စွာပြောခဲ့သည်။ ငွေတောင်းခံလွှာဆိုသည်မှာမည်သည့်ကုန်ပစ္စည်း၊
မူပိုင်, franchise ကဘာလဲ? စံနမူနာ
မူပိုင်, franchise ကဘာလဲ? ငါးဖမ်းဂိမ်း၏ဥပမာအားဖြင့်, ငါပိုပြီးအဘို့လိုပါတယ်။ ငါသည်ဤကဏ္ဍအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုအထူးသဖြင့်တော့မဟုတ်ပါဘူးနားလည်ပါသည်။ တကယ်တော့ယှဉ်ပြိုင်အထူးသဖြင့်တကယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ...
ကျေးဇူးပြု၍ ပြောပြပါ။ D71 K51 - ကြိုတင်အစီရင်ခံစာ D60 K71 - ငွေလွှဲမှု D10 K44 - ကုန်ပစ္စည်းများ (သို့မဟုတ်ပစ္စည်း) အတွက်ချက်လက်မှတ်အနေဖြင့်ငွေပေးချေခြင်း - D60 (XNUMX) KXNUMX - ကုန်ပစ္စည်းများ (ပစ္စည်း) သည်အရင်းအနှီးဖြစ်သည်။
အိမ်ခြံမြေရောင်းဘို့မဆိုငွေပေးငွေယူကောက်ချက်ချဖို့ဝယ်မှကုန်စည်ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းပိုင်ဆိုင်မှု၏ညာဘက်နှင့်ဤပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုများဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးနိုင်စွမ်းရယူရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်အရာကိုယခုအချိန်တွင်အတွက်ဝယ်ပိုင်ရှင်များ၏အခွင့်အာဏာရရှိသည် ...
ဘယ်လိုမကြာမီပြန်လာအခွန်ဖြတ်တောက်ဖြည့်စွက်ပြီးနောက်? 2-မိတ္တူအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်အခွန်နှုတ်ယူခြင်းများအတွက် documents ။ အခွန်, ဒုတိယတစ်ခုမှာမိတ္တူသင်တစ်ဦးအဝင်မှတ်သားခဲ့ကြသည်။ ...
စာရင်းစစ်ကုမ္ပဏီတွေ။ အဆိုပါစာရင်းစစ်ကုမ္ပဏီများပြုပါ, သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာအဘယ်အရာကိုဘာတွေလုပ်နေလဲ?
စာရင်းစစ်ကုမ္ပဏီတွေ။ အဆိုပါစာရင်းစစ်ကုမ္ပဏီများပြုပါ, သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာအဘယ်အရာကိုဘာတွေလုပ်နေလဲ? http://akfpartner.ru/auditorskie-uslugi သင်သည်သင်၏မေးခွန်းကိုအဖြေကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်ရှာတှေ့နိုငျရှိရာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ site ကိုသင်ဤ site ပေါ်တွင် ... အဲဒီမှာနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ် ...
လွင်ပြင်ဘာသာစကားမှာ value ကိုပို့စ်တင် buhgalteriiobyasnite မေးခွန်းတစ်ခုကို
စာရင်းကိုင်မေးခွန်းသည်ငွေပေးငွေယူ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုရိုးရှင်းသောဘာသာစကားဖြင့်ရှင်းပြပါ။ 1 Кт 62.02 - 62.01 - ကြိုတင်ငွေဖြည့်ခြင်း (တိုးတက်မှု) ကို 62.02 တွင်ထည့်သွင်းထားပြီးဖောက်သည်များ၏အကောင့်များသည် 62.01 တွင်ဖြစ်သည်။ ဒီဝါယာကြိုးကလုပ်တယ် ...
အိုင်ပီ၏ငွေပေးချေမှု - ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝင်ငွေအခွန်ကဘယ်လိုလဲ။ ဘယ်အချိန်မှာအခွန်ပေးဆောင်ရမလဲ။
အိုင်ပီ၏ငွေပေးချေမှု - ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝင်ငွေအခွန်ကဘယ်လိုလဲ။ ဘယ်အချိန်မှာအခွန်ပေးဆောင်ရမလဲ။ လူတိုင်းအတွက် - ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်တစ်နေ့လျှင်ဘတ်ဂျက်သို့ကူးပြောင်းရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
အဘယ်အရာကိုအကောင့် offsetting သလဲ? ရုံရိုးရှင်းတဲ့ဘာသာစကားရုရှ။
အဘယ်အရာကိုအကောင့် offsetting သလဲ? ရုံရိုးရှင်းတဲ့ဘာသာစကားရုရှ။ Lyudmila, သင်အလွန်ရှင်းလင်းစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်, အားလုံးရှင်းပြ! ဒါဟာသင်က Boo အဘို့အကြှနျုပျ၏ဆရာဖြစ်ရပြီမဟုတ်သောသနားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းမှာစာရင်းကိုင်! နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန် link ကို ...
စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်လှုပ်ရှားမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအဘယ်နည်း။ o အမြတ်အစွန်း o ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း o သတင်းအချက်အလက်ပံ့ပိုးမှုပgoalsိညာဉ်စာတမ်းပါစီးပွားရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကိုပြည့်မီရန်အတွက်အမြတ်အစွန်းအကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောစီးပွားဖြစ်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်ပLookိညာဉ်စာတမ်းကိုကြည့်ပါ။
ငါ UTII လျှောက်ထားဖို့ IP ကိုလက်ျာဘက်နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ရန်ရှိပါသလား?
ငါ UTII လျှောက်ထားဖို့ IP ကိုလက်ျာဘက်နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ရန်ရှိပါသလား? USN များအတွက်အခွန်အခွင့်အာဏာလျှောက်လွှာနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်5နေ့ရက်ကာလအဘို့ Apply ။ တဖန်သင်တို့မှဘာသာရပ်ကြောင်းတစ်ခုလှုပ်ရှားမှုစတင်ရန်သည့်အခါ ...
စာရင်းသည် ... ၁၀၀ ရာနှုန်းသော3စာရင်းသည်3ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစာရင်းကိုင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်အမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဘဏ္liာရေးဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများကိုရှင်းလင်းခြင်း။ ပစ္စည်းများ 1,2,3,4 "... 1 ။ သေချာစေရန် ...
သတ်မှတ်ဖို့ဘယ်လိုအရှိန်၏ရလဒ်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်မြို့တော်ဒဖြန့်ချိပမာဏ, ?? ယင်း၏အရှိန်သို့မဟုတ် deceleration ဆုံးဖြတ်ရန်မြို့တော်အလုပ်လုပ်များ၏လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်။ အကြွင်းမဲ့အာဏာလွှတ်ပေးရန်လက်ရှိနှစ်တွင်လက်ရှိသောအခါပမာဏကိုဖြစ်ပေါ် ...
ထုတ်ကုန်များရောင်းချမှုများမှဘဏ္ဍာရေးရလဒ်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့ဘယ်လို? D-90, 99-K သည်
ထုတ်ကုန်များရောင်းချမှုများမှဘဏ္ဍာရေးရလဒ်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့ဘယ်လို? D-90, 99 K-ရောင်ပြန်ဟပ်မှုသာဓကချောထုတ်ကုန်များ၏ရောင်းအား၏စာရင်းကိုင်နှင့်အခွန်အကောက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်။ ကုန်ပစ္စည်းများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုသည်၎င်း၏အပြောင်းအရွှေ့မြီစား၏အချိန်မှာဝယ်လွှဲပြောင်း ...
ငါ့ကိုအဘယ်အရာကို subkonto ပြောပြ?
စင်ကာပူဆိုတာဘာလဲ? ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု။ ဥပမာအားဖြင့်၊ 10 အကောင့်သည်ကုန်ကြမ်းများဖြစ်ပြီး၊ subconto နောက်ကြောင်းပြန်ပြောင်းခြင်း - စတော့များ၊ ကုန်ကြမ်းများစသည်တို့ဖြစ်သည်။ Subconto သည်သင်ယခင်ကမသိသောအဆိုအရသင်အကောင့်ကိုစာဝှက်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုညွှန်းကိန်းဖြစ်သည်။
ငွေဘယ်လောက်တစ်တင်းကုပ်ဖွင့်လှစ်ဖို့အကြောင်းဖြစ်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်ခန့်မှန်းသင့်သလဲ ကြှနျတေျာ့မိတျဆှေ Chelyabinsk အတွက်သေးငယ်တဲ့ဆိုင်ငှား။ အဖွင့်အဘို့အ 100 တထောင်ကိုယူ။ ပွတ်သပ်။ ထိုအခါ esch ...
ငါ့ကိုလက်လီကုန်သွယ်မှုအကြားခြားနားချက်ကိုပြောပြပါ? ဝယ်သောသူ၌တည်၏။ အဲဒီမှာလက္ကား-လက်လီ၏အယူအဆ၏ဥပဒေများ။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စားသုံးမှုများအတွက်ကုန်စည်ရောင်း-ဝယ်ယူဖြစ်ပါတယ်ရောင်းချမည်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်ရှိပါတယ်။ Opt-In နှင့်အတူနောက်ဆုံးစားသုံးမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မပါဘဲဝယ်ယူဖြစ်ပါတယ် ...
နီးပါးရှိပါသည်အားလပ်ရက်-Xia ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝင်ငွေအခွန်နှင့်အတူလောဝါယာကြိုးလုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ဘယ်အချိန်မှာဆပ်ဖို့? ကြေညာချက်ထဲမှာအားလပ်ရက် z ၏ဖြစ် / သို့မဟုတ်ရမယ်
နီးပါးရှိပါသည်အားလပ်ရက်-Xia ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝင်ငွေအခွန်နှင့်အတူလောဝါယာကြိုးလုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ဘယ်အချိန်မှာဆပ်ဖို့? တဦးတည်းရှိလျှင်ရောင်း s ကို၏ထုတ်ပြန်ချက်များ / n သို့မဟုတ်အရောင်းရဆုံး၏ယခုအချိန်တွင်မှာအရောင်းရဆုံးလွှဲပြောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝင်ငွေခွန်ဖြစ်သင့်, စားသုံးသူရေးနိုင်ပါတယ် ...
ပြစျေးနှုန်းကဘာလဲ? စျေးနှုန်းကကို item ပြ eksporte.Pod မှာကိုရောင်းမရနိုငျသောအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစျေးနှုန်းနေသောကုန်ပစ္စည်းများ၏စျေးနှုန်းကိုရည်ညွှန်းဖြစ်ပါတယ်တည်ငြိမ်ဖျောပွသ price- မပါသောအခါ Popoymu ဖြစ်ပါတယ် ...
မင်္ဂလာပါ! ငါ features တွေဖြည့်ဆည်းပေးရမည်ဖြစ်သောစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုစာရင်းကိုင်ဂဏန်းတွက်စက်၏တာဝန်သိရန်လိုသလား?
မင်္ဂလာပါ! ငါ features တွေဖြည့်ဆည်းပေးရမည်ဖြစ်သောစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုစာရင်းကိုင်ဂဏန်းတွက်စက်၏တာဝန်သိရန်လိုသလား? ကဒ်ကိုပြင်ဆင်ရောင်းချထုတ်ကုန်အပေါ်နီးပါးရှိပါသည်လိမ့်မည်။ အလွန်အချိန်ကုန်နှင့်ခက်ခဲ။ သို့သော်ယခုအထူးလည်းမရှိ ...
စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2... စာမျက်နှာ 29 Next ကို 's Page
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,351 စက္ကန့်ကျော် Generate ။